Faah-faahin cusub oo ka soo baxaysa Khasaarihii ka dhashay qaraxii lagu weeraray
Muqdisho (Horumar Online) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxeysa khasaaraha ka dhashay qarax gaari oo maanta lagu weeraray Xarunta Degmada Warta Nabadda ee Magaalada Muqdisho.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu dhuftay Xarunta Degmada, waxaana ka dhashay khasaare nafeed iyo mid bur bur hantiyadeed ah oo soo gaaray gaadiid yaalay Xarunta Degmada Warta Nabadda.
Inta la ogyahay 4 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qaraxaasi, halka sidoo kale ay jiraan dhaawacyo kale oo soo gaaray dad shacab ah, waxaa dadka dhaawacmay ku jira Xoghayaha Degmada Warta Nabadda Ali Aadan oo dhaawiciisa isbitaal loo qaaday.
Saraakiisha Ciidamada Booliska ayaa wada baaritaanka ku aadan qaraxa dhacay & meesha uu soo maray gaariga lagu qarxiyay Xarunta Degmada Warta Nabadda ee Magaalada Muqdisho.
Waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay yihiin kuwa xiran oo gaadiidka waxa ay ku soo maraan si dhib ah, lama oga meesha uu soo maray qaraxan gaariga ah ee lagu weeraray Xarunta Degmada Warta Nabadda.
Koontaroolada Magaalada Muqdisho waxaa dhooban ciidamo aad u badan oo Boolis ah, kuwaasi oo gaadiidka baara, sidoo kalena aqoonsiyo dowladeed waydiiya dadka gaadiidka wata.
Tags: #Faahfaahin #khasaare #Qarax #Warta-nabadda #weerar
Previous Post IMF: Somaliya waa ay ka gudubtay wajiga saddexaad ee Barnaamijka Deyn cafinta
Next Post Somaliland: Las’Anod police shot and injured TV journalist before illegally detaining him